Tafika an-dranomasina Malagasy - Roa andro nikatrohana ho an'ny fiarovam-pirenena
Tafika an-dranomasina Malagasy – Roa andro nikatrohana ho an’ny fiarovam-pirenena
Publié mars 24, 2022 par Book News
Nifarana ny 18 martsa teo ny atrikasa notarihin’ny Departementa amerikanina misahana ny fiarovam-pirenena ho an’ny Tafika an-dranomasina Malagasy mba hanamafisana ny fahaiza-manaon’izy ireo. Naharitra roa andro izany atrikasa izany ary nahitana voka-tsoa sahady teo amin’ny fitantanana mpiasa eo amin’ny sehatry ny governemanta malagasy.
Filaminana sy Fiarovam-pirenena
Fanatsarana ny fomba fiasa. Io no tanjona goavana napetraka tao anatin’ny fanatontosana ity atrikasa notarihin’ny Departementa amerikanina misahana ny fiarovam-pirenena ho an’ny Tafika an-dranomasina Malagasy ity. Voaresaka tao araka izany ny paikady mahomby eo amin’ny lafiny fandrindrana ny mpiasa, fangalana mpiasa vaovao ary ny fampandrosoana arak’asa ny mpiasa.
Ankoatra izay dia tsara ny mampatsiahy fa tanjona roa no nifanindran-dalana tao anatin’ny fanatanterahana azy ity satria tetsy an-daniny, nifanojo tamin’ny paikadim-pirenena Malagasy ho an’ny fiarovam-pirenena ny vokatra andrasana. Ary tetsy an-kilany, tafiditra ao anatin’ny ezakin’ny ny governemanta amerikana hanohanana ny tafika an-dranomasina Malagasy mba hananan’izy ireo mpiara-miasa mahomby hitantana sy hanara-maso ireo fari-dranomasina manokan’i Madagasikara (Zone Économique Exclusive).
Noraisin’ny ekipan’ny Institute for Security Governance (ISG) ny fitarihana ny atrikasa. Izy ireo no avy ao amin’ny sampan-draharaham-piaraha-miasa mikasika ny fiarovana sy ny filaminana, ary ao anatin’ny fandaharanasa fanavaozana ny fiarovana manerantanin’ny Departemanta Amerikana misahana ny fiarovana.
Fitantanana tsara rindra
Nahitana lafiny mahomby sahady ny fandraisana anjara tamin’izao atrikasa izao. Araka ny fampitam-baovao dia « nahafahana niantoka fiaraha-miasa sy serasera tsara kokoa mikasika ireo olana mety hatrehana amin’ny fitantanana mpiasa eo amin’ny sehatry ny governemanta malagasy » ny atrikasa.
Nisitraka ity atrikasa ity ihany koa ny Ministera isan-tsokajiny izay voakasik’izany. Isan’izany ny solontenan’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, indrindra ireo avy amin’ny Tafika sy ny Tafika anabakabaka, ary ireo solontena avy amin’ny ministera isan-tsokajiny, ahitana ny Minisiteran’ny Asa Vaventy, ny Minisiteran’ny Jono sy ny Toekarena Manga, ny Minisiteran’ny Fitsarana, ny Minisiteran’ny Fitantanam-bola, ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Siantifika, ary ny Minisiteran’ny Fitaterana.
Tao aorian’ny fanatanterahana ny atrikasa dia nanolotra ny mari-pandraisana anjara i Amy J. Hyatt, Mpiandraiki-draharaha eto amin’ny Masoivoho Amerikana. teo ihany koa izy no namporisika ireo mpandray anjara hampihatra izay fahalalana norantoviny nandritra ny atrikasa hoentin’izy ireo, mba hisian’ny fitohizan’ny fanatsarana ny sy fanamafisana hatrany ireo paikady sy fomba fiasa eo anivon’ny Tafika an-dranomasina Malagasy sy ireo minisitera isan-tsokajiny hanatsarana ny fandraisana andraikitr’ireo mpiara-miasa sivily sy miaramila.